Ukufumana ukuthandwa okungakumbi kwiiNtengiso ze-Instagram: Iindlela ezi-8 eziBalaseleyo zokuLandela | Martech Zone
Ukufumana ukuthandwa okungakumbi kwiiNtengiso ze-Instagram: Iindlela ezi-8 ezilungileyo zokuzilandela
NgoMvulo, Oktobha 21, 2019 NgoLwesithathu, Oktobha 14, 2020 Douglas Karr
Ukhuphiswano luyafudumeza eqongeni nangona kunjalo, kwaye iimveliso zijonge ukufumana eyona mikhankaso yabo yentengiso ye-Instagram. Enye yeendlela ezisetyenziswayo ukulinganisa ukubandakanyeka, kwaye ixabiso lebrendi kukufumana ukuthanda ngakumbi. Siza kuthetha ngezicwangciso ezinokuphucula inani lezinto onokuzifumana kwiintengiso zakho kwiakhawunti yakho yebhrendi.
Fumana ukuthandwa ngakumbi kwiintengiso ze-Instagram
Ukuthandwa kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yalo naliphi na iphulo kwi-Instagram. Ibonisa ukubandakanyeka kunye nenjongo evela kubasebenzisi, oko kuthetha ukuba uhamba kwicala elifanelekileyo. Oko kwathethi, kunokuba nzima ukwenza abantu bathande iiposti zakho, ngakumbi ukuba uluphawu olusandula ukuqala. Sivelise ezinye zeendlela ezinokukunceda ufumane elona nani liphezulu lokuthandwayo lwegama lakho.
1. Yabelana ngeeFoto ezikumgangatho ophezulu kunye neeVidiyo
Eyona ndlela yokuqinisekisa ukuthanda kwiakhawunti yakho kuxa uthumela umxholo ekumgangatho ophezulu. Oku kuyinyani ngakumbi kwimeko yeentengiso kuba ziya kubonwa ngabantu abaninzi kunabalandeli bakho. Uninzi lweemveliso zithatha umzamo omkhulu wokuqinisekisa ukuba iintengiso zazo zijika iintloko ezininzi. Umkhankaso wentengiso owenziwe kakuhle unamathuba amaninzi okuhamba ngentsholongwane, ubeka uphawu kwindawo ebonakalayo. Nantsi ifayile ye- umzekelo wentengiso ekumgangatho ophezulu kwi-Instagram
2. Yenza iiNkcazo ezilungileyo
Ngelixa eyona nto inomtsalane ku-Instagram kukuba liqonga lomfanekiso elithandekayo, ii-caption ziza kwisibini esisondeleyo xa kuziwa kwimveliso ebonisa ubuchule babo. Iingcaphuno ezilungileyo zifunyenwe zandisa ulwazi lwebrand kwaye zinceda ukukhumbula uphawu. Kwakhona, i-caption yinkalo yeposi yakho onokubuyela kuyo ukuze ufumane ukuthanda ngakumbi kwimeko apho umfanekiso ungonelanga. A Ingcaciso emnandi Inokufumana abalandeli ukuba banike izimvo, ezinokuphucula ukubandakanyeka.
3. Sebenzisa ii-CTA neeHashtag ngobulumko
IiHashtag kunye nee-CTAs (ukubiza isenzo) zilungile ekufumaneni abantu ukuba bazibandakanye, ukuba uzisebenzisa ngokuchanekileyo. IiHashtag yinxalenye ebalulekileyo ye Isicwangciso sokuzibandakanya kwi-Instagram. Ukufumana iintengiso zakho kubantu abakufutshane nawe, sebenzisa ii-hashtag zasekhaya kwiintengiso zakho ze-Instagram. Kananjalo, unga jonga kwii-hashtag ezidumileyo kwi-niche yakho ukufumana abalandeli ngakumbi kwiakhawunti yakho.
Ii-CTA zisetyenziselwa ukudibanisa abantu ukuba benze inyathelo lokuthatha isigqibo kwiakhawunti yakho ye-Instagram. Ii-CTA zihambelana nomxholo, kwaye kuya kufuneka uqonde ukuba uzisebenzisa phi kwaye njani. Abantu baya kwamkela kuphela i-CTA ukuba kukho into yexabiso oyinikayo. Ukudala imeko yongxamiseko xa usebenzisa ii-CTA sisicwangciso esihle. Amabinzana afana Cofa ngoku ukuze ufumane okungakumbi, ifumaneka kuphela ixesha elilinganiselweyo yimizekelo elungileyo yokwenza ukuba abantu bacofe.
4. Fumana amaXesha aPhezulu okuPosa
Umba obalulekileyo wokuzoba ukubandakanyeka ngakumbi kwiakhawunti yakho kukuqinisekisa ukuba amaxesha akho okuthumela intengiso angqinelana xa abalandeli bakho besebenza kakhulu. Akukho mntu "ixesha elifanelekileyo lokuthumela" kwi-Instagram - iyahluka ngeentlobo zeshishini kunye nendawo ekujoliswe kuyo. Oko kwathethi, umthetho ngokubanzi wesithupha ukutsala abathengi kukuthumela ngexesha iiyure zomsebenzi ngemini efana nesidlo sasemini (I-11: 00 ndiye kwi-1: 00 pmokanye emva komsebenzi (7: 00 pm ukuya 9: 00 pm). Oko kwathethileyo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo indawo ojolise kuyo. Kukho neposti ethe kratya ngokubhekisele kwixesha lokuthumela kwi-Instagram ukusuka Hubspot ukuba ungajonga.
5. Ukunyusa umnqamlezo
I-Instagram ilungele ukuthunyelwa kwiplatifomu, eyenza ukuba ibe liqonga elihle kuyo nyusa ishishini lakho ivuliwe. Ungasebenzisa i-Instagram feed yakho njengomthombo wohlaziyo kwamanye amaqonga anjenge-Facebook kunye ne-Twitter. Oku kunokusebenza ngokukodwa xa uqhuba ukhuphiswano. Abantu bayakuthanda ukuphumelela ukhuphiswano, kwaye ke ukufumana igama kwamanye amaqonga eendaba ezentlalo kunokukunceda ufumane ukubonwa ngakumbi ngumqondiso wakho. Kwakhona, uninzi lwebrand lusebenzisa i-URL kwi-bio yabo ukunxibelelana nephepha labo le-Facebook ukusuka apho ungabakhokelela kwezinye ii-URL.
6. Njengawe kwaye uphawule ngeeNiches ezihambelanayo
Enye indlela onokuthi uvelise ngayo inzala kwii-akhawunti ezinxulumene noko kwi-niche efanayo kuxa uthatha ixesha lokuzibandakanya nabo kwiakhawunti yabo. I-Instagram ihlala isebenza kumgaqo olula- ukubandakanyeka kuthethathethwano. Ke xa unxibelelana neakhawunti yabo, uyawandisa amathuba akho okuzoba ukubandakanyeka kubo. Unokufumana abalandeli abaninzi abanomdla kwiakhawunti yakho ukusukela apho, oko kuthetha ukuba ukuthanda izinto ezininzi kwiakhawunti yakho ekuhambeni kwexesha.
Joyina i-Instagram Engagement Pod
I-pod ngumyalezo othe ngqo phakathi kweqela labantu abakwi-niche efanayo kwi-Instagram kwaye bafuna ukukhulisa abalandeli babo, ukuthanda, okanye izimvo. Isiseko sayo nayiphi na ipod kukuba xa ilungu leepod lithumela umxholo omtsha, abantu abakumdumba kulindeleke ukuba bazibandakanye nawo. Oku kunceda iposti ifike encotsheni yabalandeli babo. Abantu bebesebenzisa iipods okoko i-Instagram yenze utshintsho kwi-algorithm yabo. Uhlaziyo lubonisa iiposti ngokungqinelana nokuthandwa kunokulandelelana ngokweziganeko.
8. Yenza iiNtengiso zakho ziJonge ngokuBonakala
Enye yeendlela zendalo zokufumana ukuthandwa ngakumbi kwintengiso yakho kukujonga umgangatho womxholo. Kuya kufuneka ukuba uqiniseke ukuba iintengiso zakho zinomgangatho owaneleyo kubo, ke bayazimela kuwo wonke umxholo. Oku kubandakanya ukusebenzisa imifanekiso yoyilo necacileyo yokuthimba ingqalelo yabaphulaphuli. Umzekelo wendlela iimveliso ezenza ngayo oku -
I-Starbucks ibine #FrappuccinoHappyHour iphulo eliye lasasazeka. Bafezekisile oku ngemibala eqaqambileyo kunye nokusetyenziswa okuyimvelaphi kokudala ukwenza into eyahlukileyo ebathandwayo ngabalandeli babo.
Ukusonga phezulu-Wonke umntu unokufumana ukuthanda kwi-Instagram
Unxibelelwano lwabalandeli yinxalenye enkulu ye-Instagram ngaphandle kwamathandabuzo, kwaye ukuthanda i-Instagram yeyona ndlela iqhelekileyo abantu abayisebenzisayo ukwazisa ii-brand ukuba bayazithanda (akukho pun kujoliswe kuyo) umxholo wabo. Iibhanti zichitha imali eninzi kwiintengiso, kwaye ngamanye amaxesha azikwazi ukubenza basebenze.
Ngelixa ukufumana ukuthanda ngakumbi iintengiso akunzima, kuya kufuneka ujonge ngaphezulu kwezinto ezimbalwa ukuze uqiniseke ukuba zilungile. Izinto ezinjengokuthumela amaxesha, umgangatho womfanekiso, kunye neengcaphuno zizinto ezibalulekileyo ekufuneka ziqwalaselwe ukuba ufuna abalandeli bakho baphendule. Ezi ngcebiso kufuneka zikunike ezinye izimvo malunga nendlela yokufumana okuninzi kwimikhankaso yakho yentengiso ye-Instagram. Yabelana ngendlela owakwazi ngayo ukuvuselela isicwangciso sakho sentengiso ukuze ufumane iziphumo ezingcono.
Izinto zokwazi ukuba uqalise ngokuKhuphela abaphulaphuli abagciniweyo kuFacebook
4 Ukuqwalaselwa kokunyusa imikhankaso yeFacebook ehlawulweyo